YPG စီးရီးဖိအားရေမှုံရေမွှားခြောက်စက် - တရုတ် Changzhou Dame ဆေးဝါးပစ္စည်းကိရိယာ
ဖော်ပြချက်အဆိုပါအရည်သို့မဟုတ်ကုန်ကြမ်း paste ဖိအားသို့မဟုတ်မြှေးစုပ်စက်ကနေအကူအညီဆွဲယူသော Press Atom အားဖြင့် mini ကိုအရည်ပေါက်သို့ပက်ဖျန်း, အလျင်အမြန်အပူလဲလှယ်မှတဆင့်ခြောက်သွေ့နေသည်။ (10-90 စက္ကန့်) နောက်ဆုံးမှာ, အမှုန့်သို့မဟုတ်သေးငယ်တဲ့ granules ပြီးဆုံးသည်။ ထူးခြားချက်များ 1. ခြောက်သွေ့မြန်နှုန်းအစာရှောင်ခြင်းနှင့်အထူးသဖြင့်အပူ sensitivity ကိုပစ္စည်းခြောက်သွေ့များအတွက်သင့်လျော်သည်။ 2. အဆိုပါချောထုတ်ကုန်ယူနီဖောင်းအရွယ်အစားနှင့်အတူဘောလုံး granules ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း၏လျော့ပြေနှင့်နိုင်မှုကောင်းသောဖြစ်ကြသည်။ ထုတ်ကုန်၏သန့်ရှင်းစင်ကြယ်မြင့်မားသည်နှင့်၎င်း၏ qua ...
အဆိုပါအရည်သို့မဟုတ်ကုန်ကြမ်း paste ဖိအားသို့မဟုတ်မြှေးစုပ်စက်ကနေအကူအညီဆွဲယူသော Press Atom အားဖြင့် mini ကိုအရည်ပေါက်သို့ပက်ဖျန်း, အလျင်အမြန်အပူလဲလှယ်မှတဆင့်ခြောက်သွေ့နေသည်။ (10-90 စက္ကန့်) နောက်ဆုံးမှာ, အမှုန့်သို့မဟုတ်သေးငယ်တဲ့ granules ပြီးဆုံးသည်။
1. ခြောက်သွေ့မြန်နှုန်းအစာရှောင်ခြင်းနှင့်အထူးသဖြင့်အပူ sensitivity ကိုပစ္စည်းခြောက်သွေ့များအတွက်သင့်လျော်သည်။
2. အဆိုပါချောထုတ်ကုန်ယူနီဖောင်းအရွယ်အစားနှင့်အတူဘောလုံး granules ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း၏လျော့ပြေနှင့်နိုင်မှုကောင်းသောဖြစ်ကြသည်။ ထုတ်ကုန်၏သန့်ရှင်းစင်ကြယ်မြင့်မားသည်နှင့်၎င်း၏အရည်အသွေးကိုကောင်းလှ၏။
3. ဒါဟာနယ်ပယ်ကျယ်ပြန့်ဖြစ်ပါတယ်လျှောက်လွှာတင်ခဲ့တယ်။ ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများ၏ဝိသေသလက္ခဏာများအရ, ဒါကြောင့်အခြောက်မှပူလေကြောင်းကိုသုံးနိုင်သည်ကိုလည်း granulate မှအေးမြသောလေထုကိုသုံးနိုင်သည်။ ဒါဟာကုန်ကြမ်းမှခိုင်မာတဲ့အလိုက်အထိုက်နေတတ်ပါတယ်။
4. ၎င်း၏စစ်ဆင်ရေးရိုးရှင်းပြီးတည်ငြိမ်လျက်ရှိ၏ ယင်း၏ထိန်းချုပ်မှုရိုးရှင်းပြီးအဆင်ပြေ, အလိုအလျှောက်လည်ပတ်နားလည်သဘောပေါက်ရန်လွယ်ကူသည်။
ကီလိုဂရမ် / h
ယေဘုယျအားအရွယ်အစား (O * H ကို)
အပူချိန် 200 ℃ထက်နိမ့်ဖြစ်တဲ့အခါ, parameters တွေကိုလက်တွေ့ကျတဲ့အခွအေနေအရသိရသည်တွက်ချက်ရပါမည်။
လျှပ်စစ် + ရေနွေးငွေ့
1 အငွေ့ပြန်ရေပမာဏရေငွေ့ပျံ၏ကုန်ကြမ်းများနှင့်အပူချိန်၏ဝိသေသမှဆက်စပ်ဖြစ်ပါတယ်။ စားပွဲပေါ်မှာအတွက် parameters တွေကို 150-160 ℃အဖြစ်တွက်ချက်
ကုန်ပစ္စည်းများ၏လိုအပ်ချက်ဖြည့်ဆည်းဖို့ခြောက်သွေ့ပြန်လာလက်ရှိရေနွေးငွေ့, countercurrent ရေနွေးငွေ့နှင့်အမှုန့်:2ဖောက်သည်ကဲ့သို့သောကွဲပြားခြားနားသောခြောက်သွေ့လမ်းကိုရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။
3 စီးဆင်းမှုဇယားပုံကြမ်းရုံပြပွဲများအတွက်, ဖောက်သည်လိုအပ်ချက်အရသိရသည် subassembly ကောက်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။
ဒါပေါ်စားသောက်ကုန်, ဆေးဝါး, ဓာတုစက်မှုလုပ်ငန်းများ, dyestuff, ကြွေထည်, ထဲကဓာတုပစ်စညျး, ပလပ်စတစ်စက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့်သက်ဆိုင်သည်။
ယခင်: XSG စီးရီး Rotate Flash ကိုခြောက်စက်
နောက်တစ်ခု: YZG, FZG စီးရီးဖုန်စုပ်ခြောက်စက်
high-မြန်နှုန်း centrifugal ထိုအမှုတ်လိမ်း Drier
စက်မှု Drier မှုတ်ဆေးဘူး
Lab မှရေမှုံရေမွှား လေမှုတ်စက်
ဖိအား Drier ပက်ဖြန်း
ဖုန်စုပ်ခြောက်စက်လှည့် SZG စီးရီးကိုနှစ်ချက် Cone